Aperture Linux: Nkesa maka ndị na - ese foto | Site na Linux
Aperture Linux: Nkesa maka ndị na-ese foto
@Igihe | | Imebe, Nkesa, GNU / Linux, Noticias
N’ụbọchị ndị a n’ịgụ ihe na ịgụ akwụkwọ, ahụrụ m ihe butere m ịchọ ịmata ihe ma kwado ya GNU / Linux ọ bụ maka ihe niile na onye ọ bụla. Agaba, enwetala m Linux emeghe, okirikiri nhọrọ ukwuu nke emere maka foto.
Mepee Linux dabere na emegheSUSE 12.1 64-bit. Ọ na-enye ndị na - edetu ihe ndabara, ndabara ma hazie ahazi dịka Darktable, RawTherapee, Rawstudio, DigiKam na ọtụtụ ndị arụnyere na mbụ.
Ntinye nkesa na-eweta ngwaọrụ dị ka GIMP, na mgbakwunye ndị ọzọ iji mee ka ngwá ọrụ a dị ike karị. Na mgbakwunye na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ dịka:
Oyranos na ICC Nnyocha
Otutu Photo Downloader
Ezubere iche na ndị na-ese foto, ahaziri iche pụrụ iche gụnyere ogo profaịlụ na agba dị mma iji dezie agba dị na foto gị edezi.
Okwesiri ighota na o doro anya na nkesa a na-abata (x86_64) ma emebeghi ya maka ngwaike site na ihe omuma.
Ihe nkesa a na-abịa Gnome nke 3.2 o Kde 4.7.
Onwe m akwadoro na ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ị jiri igwe arụmọrụ. Ọfọn, ọ bụ ntakịrị ihe na-ejighị n'aka ma akwadoghị gị ka ị jiri dịka sistemụ arụmọrụ.
Anọ m na-achọ na ngalaba gọọmentị ejikọtaghị na sava weebụ na ọ na-egosi naanị peeji nke adaddy. Amaghị m ma ọ bụ n’ihi ụkọ ego ma ọ bụ maka na ha agwụbeghị peeji ahụ n’ihi na ọrụ ahụ dị ọhụụ.
Ya mere, onye obula. Anyị na-atụ anya na ọrụ a ga-aga n’ihu n’ihi na ọ na-atọ ụtọ.
Ihe niile dị njikere maka okike gị iji bia site na enyemaka nke sọftụwia efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Imebe » Aperture Linux: Nkesa maka ndị na-ese foto
Agụọla m ihe gbasara nkesa a ụbọchị ole na ole gara aga. Enwere m mmasị na ya, ọ bụ n'ihi ụzọ ọ na-ewe. Kama nke ahụ, ọ bụ ụyọkọ nke dị nro elebara anya na edezi onyonyo, nke m chere na ọ dị oke mma, ka ọ ghara iweta ọtụtụ ihe agaghị eji ya.
Agụọla m ogologo oge gara aga banyere OpenSUSE a na-agbadoro distro na saịtị adịghịzi.
Mmemme ọ na-eweta na-ada mma, ụfọdụ amaghị m ma ana m anwale ha na debian m na lxde. Daalụ maka ntinye !!
magburu onwe ya, ọ bụrụ na ị tinye njikọ ahụ ...
Zaghachi na NotFromBrooklyn
Ọ dị m nwute. Njehie abụghị nke m. Ọ bụ nchịkọta akụkọ na-etinyeghị njikọ na bọtịnụ ahụ n'ụzọ ziri ezi. M gafere bụ njikọ. Lee ya ebe a. http://sourceforge.net/projects/aperturelinux/
Ọ bụ eziokwu, mperi abụghị nke gị .. Emezilarị ya .. Ndo maka nsogbu ahụ kpatara.
Bah, onye obula choro i copyomi nduru m ma o nweghi onye n’eme nke oma 😛
Chei, ekele maka ntinye, amaghị m maka distro a ka m ga lee anya 🙂
Nna nna Juno dijo
Ezi onyinye, amaara m maka ụfọdụ nkesa maka ojiji dị iche iche mana echeghị nke kachasị maka ndị na-ese foto
Aga m akwado ya!
Zaghachi Sir Juno
Achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ, anyị ga-anwale ya inwe nke na-edozi nsogbu ahụ, ọ bụ ezie na nke a na beta na-ekwe nkwa ^ _ ^
Zaghachi Davanthrax Aniki
j. carlos dijo
M ibudatara ya ọ na-ajụ maka aha njirimara na paswọọdụ as .m dị ọhụrụ na Linux Amaghị m nke m ga-etinye I ..Achọwo m na ebe nrụọrụ weebụ mbụ adịghị adị…. ị maara ihe ọ bụ ??? Daalụ m ga-eji nlezianya na-eso blog iji mụta….
Onye nwere ike ịkwado ụfọdụ ngwanrọ iji gbagoo distro a dị ka LiveUSB? Daalụ
Gịnị bụ aha njirimara na paswọọdụ maka distro a?
Linux na-emeghe ndụ na-ajụ m maka paswọọdụ
Mgbanwe na Arch Linux
Thunar ga-enwe nku anya!